इस्ला साउना - डोमिनिकन रिपब्लिकमा एउटा आकर्षक ठाउँ Absolut यात्रा
ज्ञात साउना टापु यो डोमिनिकन रिपब्लिकको सबैभन्दा ठूलो टापु हो। यो कोटूबानाम राष्ट्रिय निकुञ्जको पनि अंश हो, जसले सम्भव भएमा यस ठाउँमा थप सुन्दरता थप गर्दछ। पर्यटकहरू स्पष्ट छन् कि यो सब भन्दा लोकप्रिय गन्तव्यहरू मध्ये एक हो र यो आश्चर्यजनक होइन।
किनभने साओना टापुसँग सुन्दर समुद्री तटहरू र असंख्य गतिविधिहरू छन् जुन यो गर्न सकिन्छ। यो ती सपना टापुहरू मध्ये एक हो जुन हिस्सा हो क्यारिबियन। बिस्तारै यसले ठूलो ख्याति प्राप्त गरेको छ र यसले अधिक र अधिक भ्रमण गरेको बनाउँदछ। हामीले राम्ररी उल्लेख गर्यौं, यसको सुन्दरतामा सबै गुणहरू छन्। यस टापुमा हेर्न, हेर्न र गर्न सबै चीज पत्ता लगाउनुहोस्!
1 इस्ला साउनामा कसरी पुग्ने
2 हामी टापुमा के फेला पार्नेछौं
3 के सोना मा हेर्न र गर्न को लागी
3.1 हात जुआन
3.2 ग्यास्ट्रोनोमीको मजा लिनुहोस्
3.3 समुद्र तट को गीत
3.4 Cotubanama गुफा
3.5 फ्लेमिing्गो लगून
4 सोना टापुमा सुत्नुभयो?
5 बच्चाहरूसँग साउना टापु जान सुझावहरू
इस्ला साउनामा कसरी पुग्ने
यदि तपाईं डोमिनिकन रिपब्लिकमा जानुभयो भने, तपाईंले पहिले नै एक वा दुई दिन चयन गर्नुपर्नेछ, यो सुन्दर ठाउँको आनन्द लिनको लागि। यो टापु ला रोमाना प्रायद्वीपको हो र यसको क्षेत्रफल ११० वर्ग किलोमीटर छ। यो ठाउँमा पुग्नको लागि हामीसँग धेरै विकल्पहरू छन्। तपाईं बाट छोड्न सक्नुहुन्छ बायाहिबे, बोका चिका वा जुआन डोलिओ र पन्त कानाबाट। हामीले उल्लेख गरेका यी सबै स्थानहरूबाट क्याटामारान्सले छोड्नेछ कि करीव people० व्यक्तिको लागि क्षमता छ। अवश्य पनि, त्यहाँ केहि पनि छन् जसले स्पीडबोट्स प्रस्ताव गर्दछ, यात्राको साथ मुश्किलले २ 40 मिनेटसम्म। उदाहरण को लागी, Bayahibe डक मा तपाईं यो विकल्प पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईं बसेको ठाउँमा उही होटेलबाट तपाईं यात्रा भाँडा लिन सक्नुहुनेछ।
हामी टापुमा के फेला पार्नेछौं
मोटामोटी रूपमा हामी यस टापुको सुन्दरता बिभिन्न भागहरूमा खोज्दैछौं। ती मध्ये एक कोरल चट्टानको रूपमा तर एक श्रृंखलाको रूपमा छ लग्नेहरू, चराहरू र सरीसृपहरू त्यो यस ठाउँको साथ। यसैले प्रकृति यसमा भन्दा बढी छ। हो, हामी यो बिर्सन सक्दैनौं कि यसमा केहि सब भन्दा महत्वपूर्ण पुरातात्विक साइटहरू पनि छन्। समुद्री कछुवा र fish० भन्दा बढी प्रजातिहरू माछा ती हुन् जो यस्तै विशेष ठाउँमा बसोबास गर्छन्। यसैले यो एक सबै भन्दा महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भण्डार मानिन्छ।
के सोना मा हेर्न र गर्न को लागी
यो एक छ सानो माछा मार्ने गाउँ। तर यदि हामी यो सानो छ भनेर उल्लेख गर्‍यौं भने, यो भन्नुपर्दछ कि ती दुबै सडकहरू हुन् जहाँ हामी पूर्ण-रंग र fac्गका घरहरू देख्दछौं। तपाई परिवारका लागि उपहार किन्न रेष्टुरेन्टहरू र ठाउँहरू पनि फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
ग्यास्ट्रोनोमीको मजा लिनुहोस्
हामी टापुमा छौं र यसैले gastronomy यो पनि यसको आकर्षणको एक अनिवार्य अंश हो। समुद्री तटको खुट्टामा तपाईं यसको रेष्टुरेन्टहरूमा खानाको राम्रो प्लेटको मजा लिन सक्नुहुनेछ। दुबै लब्स्टर र माछा वा चामल र कुखुरा केही स्वादहरू हुन् जुन तपाईंले स्वाद लिन सक्नुहुन्छ। निस्सन्देह, पिउन, नरिवलको रस जस्तो केहि पनि छैन।
समुद्र तट को गीत
यो सब भन्दा मनमोहक समुद्र तट आकार कुना मध्ये एक हो। यदि तपाईं मानो जुआनबाट हिड्नुहुन्छ भने यसले तपाईंलाई केही घण्टा लिन सक्दछ, किनकि यो दक्षिण पूर्वमा अवस्थित छ। तर यदि तपाईंसँग विकल्प छ भने तपाईं मोटरसाइकल सेवा पनि भाँडामा लिन सक्नुहुनेछ, तर सँधै ड्राईभरको साथ।
यो क्यातुआनोको धेरै नजिक छ। पौराणिक कथा अनुसार, कोटुबानामा यस गुफामा १ XNUMX औं शताब्दीमा शरण लिएको थियो। तर उनी स्पेनिसबाट बच्न सकेनन् जसले उनको हत्या गरे।
सक्षम हुन चराहरूलाई रमाइलो गर्नुहोस् र अन्य प्रजातिहरू, यो लगुन नजिक पुग्नु जस्तो केहि छैन। मानो जुआनबाट छोटो पैदल यात्रा, किनकि यसले आधा घण्टा मात्र लिन्छ। तपाईं एक आकर्षण को एक धेरै संग एक ठाउँ को मजा हुनेछ।
सोना टापुमा सुत्नुभयो?
सत्य यो हो कि तिनीहरू सधैं भ्रमणहरू हुन्छन् जुन अन्य पोइन्टहरूबाट आउँदछन्। तिनीहरूले यस क्षेत्र मा दिन बिताउँछन् र दिउँसो तिनीहरू होटेलमा जान्छन्। किनभने यो भन्नु आवश्यक छ कि यो एक सुरक्षित स्थान हो। तसर्थ, अवस्थित संरचना भन्दा बढी निर्माण गरिएको छैन। टापुको पश्चिमी भागमा क्यातुआनो हो जुन नौसेनाको ठाउँ हो। मानो जुआनमा त्यहाँ टापुको जनसंख्या भएको घरहरू छन्। यो सत्य हो कि कहिलेकाँही, तिनीहरूले आफ्नो घरको ढोका खोल्न सक्छन् र तपाइँलाई रात बिताउन आमन्त्रित गर्नुहोस्। त्यहाँ तपाईंले सास फेर्ने ठूलो शान्ति र आरामदायी वातावरण भेट्टाउनुहुनेछ। त्यसैले यो सधैं एक रमाईलो अनुभव हो।
बच्चाहरूसँग साउना टापु जान सुझावहरू
साउना टापु सधैं एक हो सम्पूर्ण परिवारको लागि राम्रो विकल्प। तर यदि तपाइँ साना बच्चाहरु छन्, यो सँधै केहि राम्रो संग संगठित गर्नु राम्रो हुन्छ। तसर्थ, जब तपाईं होटेलमा हुनुहुन्छ, तपाईंले आफैंलाई यस ठाउँको प्रस्थानको समयबारे राम्ररी सूचित गर्नुपर्दछ र निश्चित रूपमा, तपाईं चाँडै उठ्नु पर्छ। सानो कुराले सामान्यतया उनीहरूले छुट्टीमा हुन्छन् वा गर्दैनन्। यदि तपाईं डु boat्गामा जानुहुन्छ भने, केही जीवन ज्याकेटहरू लिनु वा उनीहरूले प्रस्ताव गरेको कुरा तपाईंको बच्चाहरूको लागि सही आकार हो भनेर जाँच गर्नु सधैं उत्तम हुन्छ। त्यहाँ एकचोटि, तपाईं समुद्री किनार, जनावरहरू र कुनामा आराम गर्ने ठाउँको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। शान्त ठाउँ भएकोले चिन्ता लिनुपर्ने त्यहाँ अरू केही छैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » साउना टापु